ffkm: Namoha liona matory | mandimby maharo
ffkm: Namoha liona matory	Posted on 25 April 201325 April 2013 by Mandimby Maharo	“Tsy ny Fiombonan’ny fiangonana kristiana eto Madagasikara no anolotra vahaolana fa mpanamora ihany izy.” Io no natitranterin’ireto Raiamandrenim-piangonana 4 nampihaona ireo fikambanana sy vondrona teny Ivato ny 18 aprily teo. Diniky ny samy malagasy ho fampihavanana, izay no anton’ny fihaonana. Fihaonana nahavory vondron’olona maherin’ny 200. Nanome voninahitra ny fanasana azy ireo ny olobe eto amin’ny firenena. Tonga teny ny Fat Andry Rajoelina, ny Governemanta ary ireo andrimpanjakan’ny tetezamita isan’ambaratongany. Nanamarika iny andro iny koa ny fahatongavan’ny Amiraly Didier Ratsiraka. Ny Filoha teo aloha Zafy Albert koa dia nanatrika izany fivorina izany.Namaly ny antso koa ireo kandida ho filoha sy ireo masoivohon’ny Madagasikara any ivelany.
Resaky ny marenina sy ny moana ihany nefa izany raha ny nitondrana azy sy ny vokatra no tombanana. Na dia marobe aza mantsy ireo mpivory dia angady tsy mahatapak’ahitra izy ireo satria tsy tao ny Filoha teo aloha Marc Ravalomanana, andry iray iorenan’ny foto-kevitry ny fampihavanana tiana ho atao. Ny fifanolanana eo amin’ity filoha teo aloha ity sy ny Fat no fototry ny fitarazon’ny tetezamita ankehitriny. Na hiavana avokoa aza mantsy ireo vondrona 200 ireo, ka hahita vahaolana koa ireo mpanao politika rehetra tao ivato dia tsy hanan-danja izany satria mbola voahilika tsy nanatrika io fihaonana io Marc Ravalomanana. Fanomezam-boninahitra fotsiny ihany noho izany no nahatongavan’ny mpikambana ao amin’ny ankolafiny fa raha ny fahafantarana ny fifampitondrana ao amin’ity vondrona ity dia izy tenany, Marc Ravalomanana ihany no tompon’ny teny farany.
Raha noheverina fa hampihavana koa ity fivorina ity dia lasa mampizarazara ny hevitry ny maro indray izany. Maro ireo mpivory no nametraka fa tsy tokony hihitatra intsony ny tetezamita ka tsy maintsy irosona ny fifidianana filoham-pirenena. Ny Fat Andry Rajoelina dia namerina indray taorin’io fihaonana io fa tokony ny fifidianana solombavam-bahoaka no atao mialohan’ny fifidianana rehetra. Ho an’ny Didier Ratsiraka kosa dia ny fanaovana ny fihaonana antampony no mahamaika azy. Fihaonana iarahan’ireo ankolafy efatra hamahany ny olan’ny Madagasikara. I Zafy Albert kosa dia mihevitra fa tokony ho ravana izao tetezamita izao, miroso amin’ny fampihavanana avy eo ary dia mametraka tetezamita vaovao. Resaka mandeha hatramin’ny fikarakarana ity io hoe fanirin’ny Ffkm hametraka tetezamita vaovao io.
Tsy ny olona no miady fa ny hevitra.
Ny fahenona io siosio fa te hanangana tetezamita vaovao io ry zareo avy ao amin’ny fianakavimbe iraisam-pirenena dia niakatr’afo ka nanao fanehon-kevitra tsy voahevitra. Ramatoa samoura, solontenan;ny Pnud eto Madagasikara dia nahasahy nanivaivaireo mpitondra fivavahana ireo. Nohamaivaniny toy ny tsy misy hasiny ireto taiamandreny miezaka ny hisin;ny fihavanana eo amin;ny samy malagasy ireto.
Ny vokatr’io fanehonkevitra tsy voatandrina io dia niray hina tampoka ao ambadiky ny Ffkm tampoka ny ankamaron;ny mpanao politika. Tsy dia ny hevitra momba ny tetezamita loatra ny iraisan;izy ireo hina fa ny fiarovana ny fihavanana malagasy izay tian’ireto loholona ireto voizina. Hita tokoa ny maha malagasy ny tsirairay nadi tsy mitovy hevitra amin’ny lafiny politika azaizy ireo, dia ilay “maharary ny aty raha voadona ny voa”. Tsy mitsitsitsitsy teny avokoa ny malagasy manakina ity “sonegaly mahazo baiko” ity.
Tsy mbola namoaka ny fehikevitra momba iny fihaonana iny aloha ny tao amin’ny Ffkm, saingy inona fa ho sarotra ihany ny hanampatra ny hevitry ny rehetra. Hanahirana ihany manko ny hanome fahafaham-po ny rehetra ao anatin’izao savorovoron-kevitra izao. Raha fampihavanana sy fanambaran-kevitra ny amin’ny hamoahana an’i Madagasikara manko no tanjona nokendrena dia fifandrorintana no vokany. Raha fampihaonana ny samy malagasy no foto-kevitra niaingana dia misy natao ankilabao ihany ireo malagasy. Ary enga anie mba ho famahana ny krizy araka ny fanirina no ho vokatr’iny fihaonana iny fa tsy ho fihitarany indray sanatria. Raiamandreny manankaja sy ankatoavina ireo mpampivory ireo ka inoana fa hanan-kasina ny teniny. Fampihaonana ireo mpisehatra eo amin’ny politika no natao, ary olo-kendry avokoa ireo matoa nanana finiavana ny hihaona. Irina noho izany fa tsy handrarak’ilo mby an-doha isika malagasy, ka izay hita fa tsy nety tamin’iny fihaonana iny dia ho arenina amin’ireo fidinana ho ataon’ny Ffkm any amin’ny ratsany any amin’ny faritra any.
Tags: FFKM, politique, Samoura Andry RajoelinaCategories: politique